Lamjung Khabar | शासकको स्वभाव हठी भएपछि जनताले दुःख पाउँछन्
By Lamjung Khabar २०७७ साउन २७ गते मङ्गलबार ००:३९ AM
गणेश शाह पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री रहेको सरकारमा तत्कालीन नेकपा संयुक्तका तर्फबाट मन्त्री थिए ।
त्यसको केही वर्षपछि नेकपा संयुक्त तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा एकीकृत भयो । यसपछि बनेको नेकपामा शाह स्थायी कमिटी सदस्य छन्
बौद्धिक नेतामा गनिने शाहसँग खबरहबका प्रधानसम्पादक गोविन्द लुइँटेलले नेकपामा चर्किएको द्वन्द्वमा केन्द्रित भएर कुरा गरेका छन् ।
स्थायी कमिटी बैठकमा शीर्ष नेतासहित अधिकांश सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागिरहेका बेला सरकारले त अचानक संसद अधिवेशन अन्त्य पो गरिदियो त !
केही अनुमान त हुन थालेको थियो तर अचानकै संसद अधिवेशन अन्त्य गरियो । यो त संसदीय पद्धति र गरिमाकै अवमूल्य हो । पार्टीको पनि अवमूल्यन हो ।
प्रधानमन्त्री निवासभित्रै पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक भइरहेका बेला मन्त्रिपरिषदको बैठक भयो र संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय भयो । त्यहीँ भएका पार्टी नेताहरूले थाहा पाएनन् ।
झम्सिखेलमा भएको स्थायी कमिटीका केही सदस्य र केही नेताहरूको बैठकपछि प्रधानमन्त्रीले पक्ष, विपक्ष, सभामुख कसैसँग केही परामर्श नगरी, केही सुइँको नदिई संसद अधिवशेन अत्य गराउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको यो कदमले केही अप्रत्याशित घटनाहरूतर्फ संकेत गर्छ ।
तपाईंले अप्रत्याशित घटना भनेर के संकेत गर्न खोज्नुभएको हो ?
नयाँ घटनाहरू हुन सक्छन् । पार्टी विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी तीन महिनाअघिजस्तै अध्यादेश आउन सक्छ । संकटकाल लागु हुनसक्छ । पार्टी विभाजन हुन सक्छ । सरकार फेरदबलको खेल सुरु हुनसक्छ । बालुवाटार खुमलटार, झम्सिखेल आदिको सक्रियता बढ्छ र झन् बढी ध्रुवीकरण हुन्छ ।
संसद अधिवेशन नभएपछि प्रधानमन्त्रीलाई आफूअनुकूल निर्णय गर्ने बाटो खुल्छ ।
पार्टीभित्र अविश्वास त छँदै थियो । प्रधानमन्त्रीको कदमले अविश्वासको खाडल झन गहिरो भयो । खाडल पुर्न तत्कालै कुनै चमत्कार भइहाल्ने म देख्दिनँ । शिष्टताको भेटघाट छैन । नेताहरूका बीचमा शिष्टाचारपूर्वक भेट हुने, गफगाफ हुने इत्यादि केही पनि छैन । विचार–विमर्शको संस्कृति छैन । कोभिडको संकट छ । बेरोजगारी बढेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय सबैतिर अनिश्चितता छ । आत्महत्याका घटना बढेका छन् ।
यस्तो चौतर्फी संकटको समयमा सत्तारुढ दलभित्र वारपारको अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा सडकमा जुलुस हुन थालेको छ । चौतर्फी संकटको समयमा जनताका सबै समस्या ओझेलमा परेका छन् ।